Tsy misy izay tsy mikolay ny fisian’ity varotra fanafody tsy ara-dalàna ity anefa ny rehetra, indrindra fa ireo efa tratry ny fanafody lany daty ka sady very vola no diso fanantenana. Rehefa nanontaniana ny mikasika izany ny teo anivon’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka dia nambaran’ny profesora Solofomalala Gaetan, tale misahana ny tolotra ara-pitsaboana ao aminy fa ady iarahan’ny rehetra manana ny fividianana fanafody tsy ara-dalàna eny amoron-dalana tahaka ireny. Rehefa isika mpanjifa mantsy hoy izy no tsy mividy izany fa manaja ny rafitra hapetraky ny fanjakana dia ny fanatonana toeram-pivarotam-panafody ara-dalàna sy nahazo alalana dia ho foana ho azy ireny. Mikasika ny vidim-panafody indray izay antony iray manosika ny olona marary iray eto an-drenivohitra ho eny Ambohipo dia nambarany fa tsy mpamokatra fanafody isika eto Madagasikara fa manafatra any amin’ireo firenena matanjak toa an’i Inde, Eoropa. Etazonia… hatrany. Izay no antony mahalafo ny vidim-panafody, hoy izy raha manampy trotraka izany ny sandam-bolantsika izay miovaova be ihany. Miantso ny rehetra mba hanatona ny toeram-pivarotam-panafody hatrany, araka izany, ity tompon’andraikitra ity fa tsy hiantehatra amin’ireny fanafody hamidy eny amoron-dalana tsy ara-dalàna ireny.